Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguJoe
Ikhaya lethu lisembindini weTanjong Tokong nge #seaview entle kakhulu. Ungajonga i #GurneyDrive edumileyo kwibalcony! Ngaphandle koko, sinoyilo lwangoku kunye nolutofotofo lwegumbi olulungele iholide kunye nohambo lweshishini.
Ikhaya lethu le studio liza nebhedi e-1 ephindwe kabini, i-futon enye kunye nesofa etofotofo kwigumbi lokuhlala. Igumbi lethu lokuhlambela lixhotyiswe ngesifudumezi samanzi kwaye sibonelela ngeshampu, ijeli yeshawa, iphepha langasese kunye neetawuli ukwenzela ukuba ube lula (NGAPHANDLE kwebrashi yamazinyo kunye nentlama yamazinyo). Ungonwabela ezinye izinto ezinje ngeWiFi yasimahla, iMicrowave, iFriji, uMatshini wokuvasa, intsimbi, isomisi seenwele, iketile kunye nomabonwakude.
Simi kanye kufutshane ne- #Precinct10, ngaphantsi kwemizuzu emi-3 yokuqhuba ukuya #GurneyDrive, imizuzu eli-15 uqhuba ukuya e- #BatuFeringghi beach.
Ndingathanda ukudibana nalo lonke undwendwe lwam ukuba ndivumelekile. Ukuba awundibonanga buqu (ngenxa yomsebenzi wam wosuku), umamkeli-ndwendwe wam uya kunceda ukukujonga! Ungasoloko unxibelelana nam ngefowuni okanye ngomyalezo, ndiya kuzama ngako konke endinako ukukunceda.
Ndingathanda ukudibana nalo lonke undwendwe lwam ukuba ndivumelekile. Ukuba awundibonanga buqu (ngenxa yomsebenzi wam wosuku), umamkeli-ndwendwe wam uya kunceda ukukujonga! Ungasol…